संगीतस्रष्टाका नालीबेली- कोसेली - कान्तिपुर समाचार
आमाले गोपाल योञ्जनलाई संन्यासी बनाउने सपना देखेकी थिइन् । तर, गोपाल रक्सीको नशामा ढल्दै घर आएपछि आमा धुरूधुरू रोइन् ।
आधुनिक नेपाली संगीतमा काठमाडौं र दार्जिलिङ कसरी जोडिन पुग्यो ? किताबमा यसबारे तथ्यसहित चर्चा छ ।
चैत्र २१, २०७७ शार्दूल भट्टराई
झुले अर्ग्यानिक फार्महाउस एन्ड रिसोर्टमा गीत–संगीतबारे अनौपचारिक कुराकानी भइरहेको थियो । त्यसको नेतृत्व गरिरहेका थिए– बुलु मुकारुङले । कुराकानीमा सहभागी थिए– वसन्त थापा, नारायण ढकाल, डम्बर चेम्जोङ, सुरेश ढकाल र देवेन्द्र ढुंगाना ।
म कुराकानीमा सहभागी हुनुभन्दा पनि बढी मात्रामा एउटा श्रोता थिएँ । कुराकानीमा बुलु मुकारुङले केही गायक/संगीतकारका सार्वजनिक जानकारीमा नआएका प्रसंगको खुलासा गर्न थाले । केही चाखलाग्दा घटना सुनिसकेपछि मेरो जिज्ञासा बढ्यो । मैले त्यस्ता घटनाको विश्वसनीयताबारे प्रश्न गरेँ । उत्तरमा बुलुले भने, ‘त्यसका लागि पिटर जे. कार्थकको ‘नेपाली संगीतस्रष्टा’ भन्ने पुस्तक पढ्नोस् ।’
‘सेलेब्रिटी’ का निजी जीवनका सामान्य घटना पनि मानिसका लागि चासो र जिज्ञासाका विषय बन्छन् । त्यस दिन बुलुका कुरा त्यस्तै थिए । उनले मेरो कौतुहलता बढाउने काम गरे । त्यही पुस्तकबारे थप केही सोध्दै थिएँ । मेरो कौतुहलतालाई अझै बढाउने काम वसन्त थापाले गरे । उक्त पुस्तकको अध्ययनप्रति वास्तवमै जागरुक भएँ ।
आमाले गोपाल योञ्जनलाई संन्यासी बनाउने सपना देखेकी थिइन् । तर, गोपाल एक दिन रक्सीको नशामा ढल्दै घरमा आएपछि आमा धुरुधुरु रोइन् र आफ्नो सपनालाई त्याग्न पुगिन् । आमाको सपना अधुरो रहे पनि तामाङ बौद्ध परम्परामा हुर्केबढेका गोपाल योञ्जनले आफ्नै शब्द, स्वर र संगीतमा दुईवटा हिन्दु आध्यात्मिक भजन रेकर्ड गरे र जीवनभर कडा शाकाहारी बनेर रहे ।
काठमाडौंको मासंगल्लीमा रहेको नारायण साहुको ठर्रा पसलमा जानेमानेका गायक, संगीतकार र कलाकारको ठूलै जमघट हुन्थ्यो । त्यहाँका नियमित ग्राहकमा नारायणगोपाल, पिटर जे.कार्थक, उत्तम नेपाली, रवि शाह, कोकिल गुरुङ, भीमवरसिंह थापा, यमबहादुर खड्का, श्यामकृष्ण प्रजापति आदि हुन्थे । गृह मन्त्रालयबाट खटिएका कालो टोपी लाउने जासुस र लल्लुपञ्जुहरू पनि त्यहाँ कलाकारसँग घुलमिल हुन आउँथे ।
नारायणगोपाल त्यहाँको कडा नेवारी रक्सी र मसालेदार सितन निकै मनपराउँथे । एक रात ११ बजे नारायणगोपाल र पिटर ठर्रा पसलबाट निस्किए । सेतो मच्छिन्द्रनाथको मन्दिरअगाडि पुगेपछि मन्दिरभित्र रात्रिकालीन भजन चलिरहेको सुनियो । नारायणगोपाल र पिटर त्यहीँ छिरे । त्यहाँ चिलिमका चिलिम गाँजाको धूवाँ पनि उडिरहेको थियो । रक्सीको नशामै चिलिम तान्दै नारायणगोपालले धूवाँको मुस्लो फाले । त्यहाँ उनले ६ वटा भजन गाए । रातभर रमाउनेहरूका लागि अँध्यारो रात पनि जीवन्त बन्न पुग्यो ।
दार्जिलिङको चाादमारी रोडको ठाडो र घुमाउरो नालीमा कहिलेकाहीँ मातेर लडेका दुई जना प्रधानाध्यापक भेटिन्थे । तिनमा एक जना अगमसिंह गिरी र अर्का पिटर जे. कार्थकका बाजे अल्बर्ट कार्थक हुन्थे । अगमसिंह गिरी एक दिन बेलुकी मातेर पिटरको घरको गेट हल्लाउन आइपुगे । उनले भने ‘पिटर भाइ, हामीले यी बिहारी, कैयाँ (मारबाडीलाई हेपेर बोलाउने शब्द) र बंगालीहरूलाई दार्जिलिङबाट खेदाउनुपर्छ । यो भूमि हाम्रो हो । उनीहरू यहाँका होइनन् ।’
नातिकाजी शक्तिसम्पन्न व्यक्तिहरूको दबाबको पालना गर्थे । एकपटक दरबारसँग जोडिएका एक जना राणाले नातिकाजीलाई आफ्नो गीतमा संगीत भर्न दबाब दिए । नातिकाजीले पनि त्यसलाई स्वीकार गरे । उनले त्यसै दिन कार्यालयमा पुग्नासाथ त्यसमा संगीत भरे । त्यही दिन दिउँसो फत्तेमानले त्यो गीत गाए । साँझ त्यो गीत रेडियो नेपालबाट प्रसारण भयो । यस्तै कामका कारण नातिकाजीलाई दरबारको कारिन्दा ठान्नेहरू पनि थिए । उनीहरू नातिकाजीलाई पञ्चायती व्यवस्थाका पिठ्ठु ठान्थे ।
रेडियो नेपालको अवस्था निकै नाजुक थियो । त्यहाँ बाजाहरू नै थिएनन् । एउटा थोत्रे अर्गन, केही भायोलिन, केही मादल, एउटा जलतरंग, एउटा ट्र्यांगल, केही मुरली, केही बाँसुरी, केही तबेला, ढोलक र तानपुरा थिए । एक दिन रेडियो नेपालमा नारायणगोपाल एउटा गीत रिहर्सल गरिरहेका थिए । सँगैको स्टोर कोठामा रञ्जित गजमेरले एउटा डबल बेस फेला पारे र त्यो पिटरलाई दिए । बाजा पुरानो भए पनि राम्रो अवस्थामा थियो । पिटरले अभ्यास गरेर त्यसलाई ‘थर्ड इफेक्ट’ का लागि तयार बनाए । पिटरकै कारण रेडियो नेपालको रेकर्डिङमा पहिलोपटक डबल बेसको आवाज गुन्जियो ।
‘नौलाख तारा उदाए....’ भन्ने गीत सार्वजनिक हुनेबित्तिकै दार्जिलिङमा लोकप्रिय बन्यो । त्यससँगै त्यो ठूलो विवादमा पनि पर्‍यो । त्यसलाई भारतमा दबिएका आप्रवासी समुदायको विरोधी ‘अराष्ट्रिय’ गीतको रूपमा चर्चा गरियो । त्यस गीतका कारण भारतको एकतामै खतरा उत्पन्न हुन पुगेको बताइयो । त्यही गीतका कारण अम्बर गुरुङलाई खेद्ने काम सुरु भयो । डुअर्सको एउटा कन्सर्टमा त ‘खोइ अम्बरे ?’ भन्दै एउटा ग्याङ आक्रमण नै गर्न आइपुगेको थियो । त्यति हुँदा पनि दार्जिलिङमा अम्बर गुरुङको पक्षमा त्यहाँका नेताले केही बोलेनन्, केही गरेनन् ।
बच्चुकैलाश राजपरिवार र तिनका नसनाताका राणा तथा ठकुरीकहाँ गएर गीत गाउँथे । उनलाई बोलाएर गीत गाउन लगाउने कुरामा तँछाडमछाड हुन्थ्यो । हिमालय शाहकी गजबदना पत्नी प्रिन्सेस शाह त बच्चुकैलाशको हितचिन्तनमा ‘सदा व्याकुल’ देखिन्थिन् । यस्ता उच्च वर्गका धेरै महिलाको लाडप्यार उनलाई थियो । ह्यान्डसम बच्चुकैलाश त्यस्ता ‘महिलाका चहेता’ थिए ।
सारांशमा माथि उल्लिखित केही प्रसंग हुन् पिटर जे. कार्थकको पुस्तक ‘नेपाली संगीतस्रष्टा’ भित्रका । पुस्तकमा यस्ता अनेकौं प्रसंग छन् । संगीतस्रष्टाहरू प्रेममा परेका, रक्सीले मात्तिएका, अराजक बनेका, महागफाडी भएका, जुवाडे बनेर हिँडेका, गुट बनाएका, चाकडीबाज बनेका, एकले अर्काको ईर्ष्या गरेका, घमण्डी बनेका, अपमान गरेका जस्ता अनेक प्रसंग पुस्तकमा छन् । कतिपय प्रसंग रोचकमात्र छैनन्, घोचक पनि छन् । पुस्तकमा काठमाडौं र दार्जिलिङको संगीत संसारका संगीतस्रष्टालाई समेटिएको छ ।
दार्जिलिङका पिटर जे. कार्थकले १२ वर्षकै उमेरमा आफ्नो सांगीतिक जीवन सुरु गरेका थिए । उनी दार्जिलिङको ‘म्युजिकल ब्यान्ड’ को नेतृत्व गर्न पुगे । दार्जिलिङबाट नेपाल छिरेपछि र काठमाडौंमा रहन थालेपछि उनको जीवनयात्रा अनेकतिर छरिन पुग्यो । उनी क्यासिनोका कुपियर मात्र बनेनन्, स्कुल र कलेजमा अंग्रेजी पढाउने अध्यापक पनि बने । रेडियो नेपालमा पूर्णकालीन गितारवादक बनेका उनी एउटै कृति ‘प्रत्येक ठाउँ, प्रत्येक मान्छे’ बाट उपन्यासकारको चर्चामा पनि रहे । ट्राभल एजेन्सी सञ्चालन र सडक निर्माणसँग सम्बन्धित काममा पनि उनको आबद्धता रह्यो । उनी अंग्रेजी पत्रिकाका स्तम्भकार पनि रहे । उनको सम्पर्क–सम्बन्ध विभिन्न क्षेत्रका मानिससँग भयो । तर, यस पुस्तकमा उनले आफ्नो संगतका संगीत स्रष्टाहरूलाई मात्र समेटेका छन् ।
राजा महेन्द्रले अम्बर गुरुङलाई नेपाल राजनकीय प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका लागि ‘आयात’ गरेपछि दार्जिलिङका संगीत स्रष्टाहरूको काठमाडौं बसाइँसराइ बढेको विचार राख्ने पिटरले अम्बर गुरुङलाई नेपाली आधुनिक संगीतमा सबैभन्दा ठूलो स्रष्टा ठानेका छन् । उनले अम्बरलाई आधुनिक नेपाली संगीतका ‘अल्फा’ र ‘ओमेगा’ भनेका छन् । आफूहरूका लागि अम्बर गुरुङ उस्ताद, नाइके, पथप्रदर्शक, दार्शनिक, एकभन्दा बढी अवतारका गुरु र इटालीका प्रख्यात अर्केस्ट्रा कन्डक्टर आर्तुरो तोस्कानिनीको साक्षात अवतार भएको मानेका छन् । सँगसँगै रेडियो नेपालमा अम्बर गुरुङ, गोपाल योञ्जन, नारायणगोपाल, नातिकाजी र शिवशंकरका सामान्य सहयोगी बन्नकै लागि आफ्ना सारा सिर्जनशील इच्छाहरू दबाएर बस्नुपरेको गुनासो पनि पिटरको छ ।
पुस्तकमा पिटरले विभिन्न गायक/संगीतकारहरूका स्वभावबारेसमेत तिखो टिप्पणी गरेका छन् । उनका अनुसार, बेसुरा गाए पनि गायिका कहलिएकी र ‘सेक्स बम’ मानिएकी दिलमाया खाती दम्भी र अहंकारी थिइन् । पिटर योगेश वैद्यलाई एकलकाँटे, अभिमानी र साम्प्रदायिक ठान्छन् ।
नामचाहिँ पुण्यात्माजस्तो भए पनि भक्तराज आचार्यलाई उनी दम्भी, अहंकारी, व्यर्थको फुलेल गायक मान्छन् । उनी शान्ति ठटाललाई एकलकाँटे, अरूसँग नमिल्ने, हेपाहा, रूखो र छुच्ची ठान्छन् । उनी अम्बर–शान्तिको प्रेमजालको कुरा पनि गर्छन् । उनको टिप्पणी छ– ‘शान्तिजस्तो एकल महिलाका लागि यसो हुनु स्वाभाविक थियो होला तर अम्बर गुरुङ त चार जना छोराछोरीसमेत भएका विवाहित पुरुष थिए । प्रेम र संगीतमा सम्भवतः जे पनि क्षम्य छ ।’ पिटरले रेडियो नेपालमा वाद्यवादक भएर दस वर्ष काम गर्दा अरू सबैसँग आफ्नो राम्रो सम्बन्ध भए पनि तारादेवीसँग भने बोलचालसमेत नभएको बताएका छन् ।
संगीतसँगै पिटर राजनीतिको कुरा पनि गर्छन् । उनले नेहरूको ‘समाजवादी भारत’ लाई बन्द मुलुक बताएका छन् भने बंगाली मार्क्सवादीहरू आधुनिक संगीत र संगीतकारप्रति असहिष्णु भएको उल्लेख गरेका छन् । डुअर्समा कन्सर्ट बिथोलेर अम्बर गुरुङ र उनको टोलीलाई लखेट्ने ‘राजनीतिक गुन्डाहरू पछि नक्सलाइटका नामले चिनिएको’ दाबी पिटरको छ । गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनका प्रमुख सुभास घिसिङले छेडेको अभियानलाई उनले बौद्धिकताविरोधी अभियान मानेका छन् । नेपालका राजा महेन्द्रप्रति भने उनको सद्भाव देखिन्छ ।
वसन्त थापाको सम्पादन, संयोजनमा हिमाल किताबबाट प्रकाशित यो पुस्तक पढ्नुअघि यसबारेका चर्चामात्र सुनेको अवस्थामा लागेको थियो– पुस्तक केही संगीतस्रष्टाको निजी जीवनसँग मात्र सम्बद्ध छ । तर, किताब पढ्दै जाँदा लाग्यो– पुस्तकले आधुनिक नेपाली संगीतको आरम्भ, विकास र यसमा संलग्न स्रष्टा बारेसमेत रोचक पारामा तथ्यगत जानकारी दिने काम गरेको छ । आधुनिक नेपाली संगीतमा नेपालको काठमाडौं र भारतको दार्जिलिङ कसरी जोडिन पुग्यो भन्ने विषयमा पनि पुस्तकमा उल्लेखित सन्दर्भहरूले तथ्यसहित उजागर गरेका छन् ।
प्रकाशित : चैत्र २१, २०७७ १२:३२
‘क्रोधी’ कविको सन्तान प्रेम
कवि शेली विद्रोही थिए । आफूले न्याय नपाएपछि शेलीले क्रोधका साथ भनेका थिए– ‘धिक्कार छ न्यायाधीश तिमीलाई !’ न्यायालय र न्यायाधीशको विरोध गर्न नपाइने अवस्थामा उनले न्यायाधीशकै निन्दा गरेर कविता किन लेखे ? यसको कारण खोज्न कवि शेलीको पारिवारिक जीवनको यथार्थतिर फर्किनुपर्ने हुन्छ ।
मंसिर २७, २०७७ शार्दूल भट्टराई
बेचिएको छ न्याय, कुल्चिएको छ सत्यध्वस्त गरिएको छ प्रकृतिको महान् महत्ताजालझेलमा सञ्चित छ स्वर्णराशि ध्वंसको सिंहासनमा बसेर चर्कोसँग चिच्याऊ तिम्रो देशको श्राप तिमीमाथि छ ।
प्रस्तुत पद्यांश कवि शेलीको हो । यो उनको उत्कृष्ट कविताको अंश होइन, न्यायाधीशविरुद्धको अभिव्यक्तिका कारण चर्चित एउटा कविताको अंश हो । भनिन्छ— जीवनमा जो दुःखमा परेको छ, उसैलाई दुःख थपिन्छ र जीवनमा जो अन्यायमा परेको छ, ऊ नै थप अन्यायमा पर्छ । सबैको जीवनमा यस्तो भनाइ लागू नहोला तर कतिको जीवनमा यो भनाइ सत्य–साबित भएको छ । बेलायतका विश्वचर्चित कवि पर्सी बिस शेलीले आफ्नो जीवनमा त्यही भनाइ लागू भएको अनुभव गरे ।
मानिसले न्यायका लागि जाने ठाउँ न्यायालय हो तर त्यहीँबाट न्याय पाउन नसकेपछि गर्ने के ? न्यायालयको निर्णय नै अन्तिम मानिने अवस्थामा त्यसका विरुद्ध बोल्न पनि नपाइने । भन्छन्— बोल्यो कि पोल्यो । तापनि कतिले विभिन्न शैलीमा आफ्नो अभिव्यक्तिलाई न्यायालयले गरेको निर्णयको विरोध गर्ने विकल्प बनाएका छन् । आफूमाथि अन्याय भएपछि कवि शेली पनि
आफ्नो अभिव्यक्तिमार्फत न्यायाधीशकै विरुद्धमा उत्रिएका थिए । न्यायलाई ठगी र खरिद–बिक्रीको विषय बनाउने न्यायाधीशलाई उनी व्यभिचारको दासका रूपमा धिक्कार्न पुगेका थिए :
ए ! दास म तिमीलाई धिक्कार्छु तर घृणा गर्दिनँ
नर्कलाई खाइरहेको पृथ्वीलाई सन्तुष्ट राख्न सक्छौ भने
त्यो जुन एउटा दानवी–कला हो
तिम्रो चिहानमा यो श्राप पूर्ण रूपमा वरदान हुनेछ ।
कवि शेली विद्रोही थिए । उनी न्यायका पक्षमा बोल्थे तर आफैँ अन्यायमा परे । आफूले न्याय नपाएपछि शेलीले क्रोधका साथ भनेका थिए– ‘धिक्कार छ न्यायाधीश तिमीलाई !’ उनले ती न्यायाधीशको निन्दा गर्दै कविता नै लेख्न पुगे । न्यायालय र न्यायाधीशको विरोध गर्न नपाइने अवस्थामा उनले न्यायाधीशकै निन्दा गरेर कविता किन लेखे ? यो कविता लेख्नुको कारण के थियो ? यसको कारण खोज्न कवि शेलीको पारिवारिक जीवनको यथार्थतिर फर्किनुपर्ने हुन्छ ।
बाबुले आफूलाई नियन्त्रणमा राखेर अत्याचार गर्न थालेपछि शेलीले घरबाटै विद्रोह सुरु गरे, जुन समयमा उनी बालकै थिए । विद्यालयमा पढिरहेका शेलीको पढाइ खर्चसमेत बाबुले दिन छोडे । यस स्थितिमा शेली अझै विद्रोही बने । घरबाट सुरु भएको उनको विद्रोह सामाजसँग जोडिन पुग्यो । उनी बेलायतका दुःखीहरूको पक्षमा उभिन पुगे । त्यहाँका सामाजिक र राजनीतिक गतिविधिहरूमा उनको चासो बढ्यो ।
विद्रोहको आवाज बोकेर अगाडि बढ्ने सिलसिलामा किशोर शेलीको भेट ह्यारिएट वेस्टब्रुक नामकी किशोरीसँग भयो । ह्यारिएट पनि घरभित्र बाबुको नियन्त्रणलाई आफूमाथिको अत्याचार ठान्थिन् । विद्यालयका शिक्षकहरूले अनुशासनको कुरा सिकाउँदा उनलाई असह्य हुन्थ्यो । शिक्षकहरूले पढाइलाई महत्त्व दिने कुरो गर्दा रिसले उनको कन्पारो तात्थ्यो । सामाजिक मर्यादाका सीमाहरूलाई उनी कारागारको बन्धनजस्तै ठान्थिन् । उनको त्यस्तो स्वभाव शेलीलाई मन पर्‍यो । शेलीले ह्यारिएटलाई आफूजस्तै विद्रोहीका रूपमा बुझे । त्यसमाथि ह्यारिएट सुन्दरी थिइन् । त्यसकारण पनि शेली उनीप्रति आकर्षित हुन पुगेका थिए ।
ह्यारिएटले आफूलाई घरको अत्याचारबाट मुक्त गर्न शेलीलाई भनिन् । आफूलाई मन परेकी केटीलाई भगाउन शेली पनि तयार भए । उनले ह्यारिएटलाई भगाएर स्कटल्यान्ड पुर्‍याए । विवाहका लागि ह्यारिएटको उमेर पुगेको थिएन । कानुनअनुसार विवाह गर्नका लागि अझै दुई वर्ष पर्खिनुपर्थ्यो तर शेली र ह्यारिएटले त्यो कानुनी प्रबन्धलाई पनि चुनौती दिएर विवाह गरे । केही समयपछि शेलीले आफू भ्रममा परेको महसुस गरे ।
विवाहअगाडि उनले ह्यारिएटलाई जुन रूपमा बुझेका थिए, विवाहपछि त्यस रूपमा पाउन सकेनन् । उनमा शेलीमा जस्तो मानवीय भावना थिएन । शेलीमा जस्तो क्रान्तिकारी जोस पनि थिएन । शेलीले ह्यारिएटलाई एउटी मूर्ख युवतीको रूपमा पाए । ह्यारिएटको मूर्खताकै कारण उनीहरूबीच झगडा सुरु भयो । तैपनि शेलीले सकेसम्म मिलेर दाम्पत्य जीवनलाई अगाडि बढाउने उद्देश्यले दुई वर्षपछि कानुनी रूपमै ह्यारिएटसँग विवाह गरेका थिए ।
शेलीले ‘एन इन्क्वाइरी कन्सर्निङ पोलिटिकल जस्टिस’ भन्ने पुस्तक पढे । उनी त्यसबाट निकै प्रभावित भए । त्यस पुस्तकका लेखक विलियम गडविन लन्डनमै बस्छन् भन्ने कुरो उनले थाहा पाए । गडविनलाई भेट्ने इच्छा उनमा जाग्यो । उनी उत्साहका साथ गडविनलाई भेट्न पुगे । पहिलो भेटमै उनी गडविनको बौद्धिकताबाट प्रभावित बने । त्यसपछि उनी निरन्तर गडविनकहाँ जान थाले । गडविनले पनि शेलीलाई स्वच्छन्दतावादी र विद्रोही कविको रूपमा माया गर्थे ।
राजनीतिक चिन्तक, पत्रकार र उपन्यासकारका रूपमा चिनिएका विलियम गडविनकी जेठी पत्नी थिइन्– म्यारी वोल्स्टोनक्राफ्ट, जो नारीवादी दार्शनिक थिइन् । गडविन र वोल्स्टोनक्राफ्टकी एउटी छोरी थिइन्– म्यारी वोल्स्टोनक्राफ्ट गडविन । म्यारी गडविन एघार वर्षकी हुँदा उनकी आमाको निधन भएपछि उनको हेरचाह बाबुले गरेका थिए । कवि शेली विलियम गडविनकहाँ गइरहने क्रममा उनको भेट उनकी छोरी म्यारी गडविनसँग भयो । शेली र म्यारीबीच निरन्तरको भेटले दुईबीच घनिष्ठता बढ्दै गयो । आफ्नी पत्नी ह्यारिएटको स्वभाव र व्यवहारबाट अघाएका र हैरानीमा परेका शेली म्यारीको स्वभाव र व्यवहारबाट भने निकै नै प्रभावित बने । म्यारी उनकी पत्नी ह्यारिएटजस्ती सुन्दरी त थिइनन् तर लेखाइ, पढाइ र बौद्धिकताका दृष्टिले भने अतुलनीय थिइन् । त्यसैले शेली ह्यारिएटसँग टाढिँदै गएका थिए भने म्यारीसँग नजिकिँदै गएका थिए । शेलीजस्तो उदीयमान कविसँग नजिक रहन पाउँदा म्यारी पनि खुसी थिइन् ।
शेलीको म्यारी गडविनसँगको सम्बन्ध बढ्दै गएको कुरा ह्यारिएटले थाहा पाइन् । शेलीसँग ह्यारिएट क्रुद्ध बनिन् । शेलीको ह्यारिएटसँगको सम्बन्ध टुट्दै गयो भने म्यारीसँगको सम्बन्ध गाढा बन्दै गयो । ह्यारिएटले शेलीलाई म्यारीसँगको सम्बन्ध तोड्न भनिन् तर शेलीले त्यो सम्बन्ध कुनै हालतमा नतोडिने, बरु निकट भविष्यमा म्यारीसँग विवाह नै गर्ने अन्तिम निर्णय सुनाए ।
शेलीको निर्णय सुनेपछि गर्भवती ह्यारिएट रिसाएर शेलीसँग नबस्ने निर्णयमा पुगिन् । उनी आफ्ना बाबु भएका ठाउँमा पुगिन् र त्यहीँ बस्न थालिन् । शेली पनि म्यारीलाई लिएर स्विट्जरल्यान्डतिर गए । त्यहीँ शेली र म्यारीको भेट कवि बाइरनसँग भयो । म्यारीले स्विट्जरल्यान्डमै छोरो जन्माइन् । स्विट्जरल्यान्डबाट फर्केपछि शेलीले ह्यारिएटलाई भेटे र म्यारीसँगै मिलेर बस्न भने तर ह्यारिएटले मानिनन् । म्यारीलाई त्यागेमा मात्र आफू फेरि सँगै बस्न सक्ने कुरो शेलीलाई बताइन् । तर, शेलीले कुनै पनि हालतमा म्यारीलाई नत्याग्ने कुरो दोहोर्‍याए । शेली र ह्यारिएटबीचको सम्बन्ध टुट्यो ।
ह्यारिएट ज्यादै निराश बनिन् । उनलाई जीवनदेखि नै वाक्क लाग्यो । शेलीका तर्फबाट उनका एक छोरा चार्ल्स र एक छोरी एलिजाको जन्म भएको थियो । ती दुवै ह्यारिएटसँगै थिए । पति शेलीप्रतिको माया त मरिसकेको थियो, आफ्ना छोराछोरीप्रतिको मायाले पनि ह्यारिएटलाई बचाउन सकेन । उनले तालमा डुबेर आत्महत्या गरिन् ।
ह्यारिएटको आत्महत्याबाट शेली दुःखी त भए तर उनको दुःख धेरै दिन रहेन । बरु ह्यारिएटको आत्महत्याले आफूलाई कानुनी तवरमै म्यारीसँग विवाह गर्न बाटो खुलेको महसुस गर्न पुगे । नभन्दै ह्यारिएटको आत्महत्याको लगत्तै शेलीले म्यारीसँग कानुनी तवरमा विवाह गरे ।
म्यारी वोल्स्टोनक्राफ्ट गडविन आफैँ पनि उपन्यास लेखनमा लागेकी थिइन् । उनले पति शेली र अर्का कवि बाइरनको प्रेरणाबाट ‘फ्रानकेन्स्टाइन’ उपन्यास लेखिन् । पछि उनी उपन्यासकार, नाटककार र निबन्धकारका रूपमा चिनिन पुगेकी थिइन् ।
शेलीले म्यारीसँग विवाह गरे पनि उनलाई ह्यारिएटतर्फका आफ्ना छोराछोरीको चिन्ता भने धेरै थियो । बालक नै भएकाले उनीहरूको लालनपालन र शिक्षादीक्षालाई लिएर शेली निकै चिन्तित बने । उनले म्यारीसँगसमेत कुरो गरेर ह्यारिएटतर्फका छोराछोरी दुवैलाई आफैँसँग राख्ने विचार गरे । उनी छोराछोरीलाई लिन भनेर गए तर ह्यारिएटका बाबुले ‘पत्नीलाई माया नदिनेले उसका केटाकेटीलाई पनि माया दिन नसक्ने’ भन्दै छोराछोरी जिम्मा लगाउन अस्वीकार गरे । यसबाट शेली आक्रोशित बन्न पुगे ।
आक्रोशित अवस्थामै शेली आफ्ना छोराछोरी आफूले पाउनुपर्ने माग गर्दै अदालतमा पुगे । उनले अदालतमा मुद्दा हाले । अदालतमा बहस चल्यो । शेलीले आफ्ना छोराछोरी आफूले नपाउने कल्पना पनि गरेका थिएनन् तर अदालतका न्यायाधीशले उनले सोच्दै नसोचेको निर्णय गरिदिए । न्यायाधीशले छोराछोरीको जिम्मेवारी लिन र उनीहरूको भविष्य निर्माण गर्न शेलीलाई अयोग्य ठहर गर्दै उनलाई छोराछोरी जिम्मा लगाउन नमिल्ने निर्णय दिए । न्यायाधीशको यस्तो निर्णयको शेलीले तत्कालै कडा विरोध गरे । न्याय दिन बसेको न्यायाधीशले नै अन्याय गरेको आरोप उनले लगाए । उनले खुल्लमखुला न्यायाधीशको विरोध मात्र गरेनन्, ती न्यायाधीशका विरुद्धमा कविता नै लेखे । ‘टु द लर्ड चान्सलर’ शीर्षक कवितामा उनले न्यायाधीशलाई प्राकृतिक नियमविपरीत घृणा, द्वेषले भरिएको, अनैतिक र अपवित्र व्यक्तिका रूपमा चित्रण गर्न पुगे :
त्यो घृणा जसले बाबुको प्रेमको परीक्षा लिन्छ
त्यो द्वेष जसले बाबुको संरक्षणको हत्या गर्छ
सबैभन्दा अपवित्र हात
जसले प्राकृतिक नियमलाई मिच्ने आँट गर्‍यो
खेदद्वारा भन्नुपर्छ– त्यो तिमीले गर्‍यौ ।
दुई सय वर्षअघि लेखिएको यस कवितामा कवि शेलीले न्यायाधीशको घोर विरोध र निन्दा गरेपछि उनलाई ‘ज्यादै क्रोधी’ व्यक्तिको रूपमा चित्रण गर्नेहरू पनि भए । उनको यस कवितालाई ‘उग्र–स्वर’ मानेर विरोध गर्नेहरू पनि भए ।
निजी पीडाको विषय भए पनि यस कवितालाई शेलीले सामाजिक–राजनीतिक सरोकारको विषय बनाएका छन् । कवितामा शेलीको सिर्जनात्मक व्यक्तित्व राजनीतिसँग जोडिएर प्रस्तुत भएको छ । त्यसकारण पनि शेलीको यो कविता एउटा न्यायाधीशविरुद्धको आक्रोशको अभिव्यक्ति मात्र नभएर न्यायका सम्बन्धमा सामाजिक–राजनीतिक सरोकारको अभिव्यक्ति बन्न पुगेको छ ।
कवि शेलीले यस कवितामा अनेक कोणबाट न्यायाधीशको निन्दा गरेका छन् । एउटा न्यायाधीशलाई कवितामा यतिधेरै निन्दा गर्नुले उनको क्रोध सीमाहीन अवस्थामा रहेको बुझ्न सकिन्छ । उनी ती न्यायाधीशलाई पुरातनपन्थी, जाली, ठग, भ्रष्ट, अन्यायी, अत्याचारी र दुष्ट ठान्छन् । मानवीय प्रेम, आत्मीयता, अपनत्व र भ्रातृत्वलाई न्यायाधीशले ध्वस्त गरेको विचार उनी राख्छन् । राजनीति र न्यायिक प्रणालीअनुसार रक्षक नै भक्षक भएझैँ न्यायाधीश पनि सामन्ती अन्याय र अत्याचारको दास भएको महसुस कवि शेलीले गरेका छन् । उनी त्यस्ताको पतनले नै विनाशको मापन गर्ने निष्कर्ष निकाल्छन् । न्यायाधीशका कर्मलाई दानवी–कलासँग जोडेर प्रस्तुत गर्ने काम उनले यस कवितामा गरेका छन् । न्यायको ठेकदारीमा प्रतिगामी न्यायाधीशले न्यायकै धज्जी उडाएको ठान्छन् कवि शेली । त्यस्तो न्यायाधीशलाई उनी चिहानमा गाडिएको एउटा नकाबधारीको पुनर्जन्मझैं ठान्छन् :
दुर्गन्धित, ग्रन्थिदार ,चरम अन्धकारमा
जहाँ धेरै टाउका भएको कीरा छ
जसले हाम्री आमाको हृदयलाई छियाछिया बनाउँछ
रक्षक नै भक्षक बनेर
चिहानमा गाडिएको एउटा नकाबधारी पुनर्जन्म !
तिम्रो देशको श्राप तिमीमाथि छ ।
कवि शेली विद्रोह, स्वतन्त्रता र मानवीय भावनालाई व्यक्त गर्ने सिलसिलामा कतिपय विवादमा परे । दुःख, पीडा र उत्पीडनलाई सशक्त स्वर दिने शेलीका अभिव्यक्तिलाई लिएर धेरै बहस पनि भए । उनको यही कविता पनि ठूलै विवादको विषय बन्न पुगेको थियो तर उनले त्यस्ता विवादलाई वास्ता गरेनन् । अरूले के भन्छन् भन्दा पनि आफ्नो सामाजिक दायित्व के हो भन्ने कुरालाई शेलीले बुझेका थिए । उनको त्यही बुझाइकै कारण पनि उनी कम उमेरमै विश्वचर्चित बन्न पुगेका थिए ।
प्रकाशित : मंसिर २७, २०७७ ११:२६